Isaga sabaphila isikhathi eside ngu-Eva García Sáenz, itulo ebingalindelekile | Izincwadi Zamanje
Isaga sabadala uchungechunge olunezici zomlando ezishicilelwe izitolimende ezimbili: umndeni wakudala (2012) futhi Amadodana ka-Adam (2014). Isihloko sokuqala simakwe njengesiqalo semibhalo esiyimpumelelo kakhulu kumlobi wamanoveli waseSpain u-Eva García Sáenz, ochazwe ngabagxeki abakhethekile njengesimo esikhulu sokushicilela esaqala emithonjeni yezobuchwepheshe.
I-saga iqala ngokwethulwa komlingiswa ophambili, u-Iago del Castillo oneminyaka engu-10.300 XNUMX. Uqala nge-co-star (Adriana Alameda) uphenyo oluyinkimbinkimbi olufuna ukuxazulula impicabadala yofuzo lwentsha yaphakade yokuphila isikhathi eside. Ingxenye yesibili iveza ukuvela okujulile kwabalingiswa phakathi komjaho obhekene nesikhathi okushiya igebe elincane esitolimende sesithathu. Ngamafuphi, incwadi okufanele uyifunde ngaphambi kokuba ufe.
2 Iploti, ukuhlaziywa kanye nabalingiswa beSaga Yabaphila Isikhathi Eside: Umndeni Omdala
2.1 Ukuguqulwa kwentsha yaphakade
2.2 Iago del Castillo kanye nokufuna izimpendulo
2.3 UJaime del Castillo
2.4 UKyra del Castillo
2.6 ULür, "inzalamizi"
3 Ukuhlaziywa kanye ne-synopsis yamaDodana ka-Adam
4 Ngabe kuzoba nesitolimende sesithathu seSaga seSikhathi Eside?
U-Eva García Sáenz wazalwa ngo-1972 eVitoria, e-valava. Uneziqu ze-optics ne-optometry, eziphothule e-University of Alicante, umsebenzi ayewenza ngaphambi kokuzinikela ngokugcwele ezincwadini. Ukushicilelwa koqobo kwe- Isaga sempilo ende: umndeni wakudala (2012) yenziwa nge-web portal i-Amazon.com, ngemuva kokungatholi abamemezeli babe nentshisekelo ngomsebenzi wakhe.
Kusukela lapho, uGarcía Sáenz wasizakala ngokwamukelwa kahle kwencwadi yakhe yokuqala ukukhuthaza ukukhishwa kwakhe okulandelayo: Amadodana ka-Adam y Indlela eya eTahiti, zombili kusukela ngo-2014. Ngesikhathi se-2016 isitolimende sokuqala salokho akuthandayo I-White City Trilogy, Ukuthula komlungu, kuqhubeka no Imikhosi yamanzi (2017) futhi Amakhosi esikhathi (2018).
Ungumbhali okwazi ukwenza isitayela sakhe se inoveli emnyama, lapho ahlola khona imingcele phakathi kwezinto ezingenzeka nezinganekwane ngendlela ejabulisa kakhulu. Ngokwengeziwe, uGarcía Sáenz ukhombise amandla amakhulu okuphenya nokulungiselela ngesikhathi sokucacisa ukulandisa kwakhe ngakunye, ngakho-ke, ukwazile ukuzicwilisa emhlabeni wezemivubukulo noma emlandweni wamaphoyisa ngendlela ethembekile nephelele.
U-Eva García Sáenz.
Iploti, ukuhlaziywa kanye nabalingiswa beSaga Yabaphila Isikhathi Eside: Umndeni Omdala
Ukuguqulwa kwentsha yaphakade
Le ncwadi ibheka ubukhona bomndeni wabantu abangakhuli ngaphezu kweminyaka engamashumi amathathu ngenxa yokuguquka kwezakhi zofuzo okungaziwa. Lezi akuzona izinganekwane noma izidalwa ezingafi. Eqinisweni, umsuka walesi simo ungofuzo. Kodwa-ke, kungani kusakazwe ngokungajwayelekile emlandweni kuhlala kufihliwe.
Iago del Castillo kanye nokufuna izimpendulo
Ngakho, U-Iago del Castillo unquma ukuthola izimpendulo, eqhutshwa ngabafowabo uJaime del Castillo noKyra del Castillo. Wazalelwa ogwini lwaseCantabrian eminyakeni eyi-10.300 XNUMX eyedlule, u-Iago (empeleni, igama lakhe ngu-Urko) uyindoda ebukeka ivuthiwe ethanda ulwazi, umqokeleli okhuthele weziqu zasekolishi, kanye nomuntu othanda ukuhlanya uma kuziwa ekuxazululeni izinkinga.
Usebenza njengomxhumanisi wezobuchwepheshe weMuseum of Archaeology of Cantabria (MAC). Ngemuva kokushona kwendodana yakhe uGunnarr e-Battle of Kinsale (e-Ireland, ngo-1602), u-Urko wadlula enkathini yokuphuza ngokweqile. Kwakunzima ukuthi alulame kulo mkhuba. Ngaphezu kwengxenye yemicimbi kule noveli ilandiswa nguye uqobo, kulayini wesakhiwo owenzeka esikhathini samanje.
Kodwa-ke, ngezikhathi ezithile imibono yezikhathi zasendulo (izikhathi zangaphambi komlando noma weScythian, ngokwesibonelo) ikhonjiswa ngezinkumbulo zabalingiswa ukuze balandise izehlakalo zezikhathi ezedlule. Ngaphezu kwalokho, U-Iago wabelana nabafowabo kanye noDana ngendima ye-protagonist. Manje, nguyena onesisindo esithe xaxa ngenxa yendima yakhe yobuholi emndenini wakudala.
UJaime del Castillo
UJaime del Castillo, ogama lakhe langempela nguNagorno (owazalelwa e-Ukraine, iminyaka: 2.700), Ungumxhasi we-MAC. Akakaze anethezeke ngesikhundla sikamfowabo omdala emndenini wakudala. Ugcina umcebo wakhe ubonga ngempumelelo yezinkampani zakhe. Umlingiswa wakhe ophikisanayo no-elitist ungumphelelisi omuhle wesimo sakhe sengqondo somuntu othanda ubudoda odelela imindeni ehlala isikhashana.
UKyra del Castillo
Ngakolunye uhlangothi, UKyra del Castillo (uLyra) ungumphathi weLabhoratri Yokubuyiselwa Kwe-MAC. Kuyo yonke iminyaka ecishe ibe ngu-2.500 XNUMX, ilahlekelwe yizingane eziningi zesikhashana, ngakho-ke, ukukhomba isakhi sofuzo esidala impilo yesikhathi eside kube yisizathu esiyinhloko sokuba khona kwayo ukuze kungaphinde kubuye ukuhlukumezeka kwayo kwangaphambilini. Ngesimo esizolile nesigodliwe, usola kakhulu labo abaseduze kwakhe, ngaphandle kwe-Urko.
Ekuthuthukisweni kwesakhiwo, ukubonakala kuka-Adriana "Dana" Alameda Almerana kuyisinqumo esinqumayo. Uyisifundiswa esivela kwaSantander oyingcweti ku-Prehistory, futhi usebenza njengenhloko yokongiwa komnyango we-MAC's Prehistory. Ungowesifazane osemusha owazalwa ngo-1980, ohlukaniswa nobulukhuni bakhe kanye nekharikhulamu lakhe elihlaba umxhwele elibandakanya umsebenzi kumadiphozithi abaluleke kakhulu eYurophu.
Isisusa sikaDana ukucacisa izimbangela zokuzibulala kukanina ezenzeka esemncane. Yize ekuqaleni ishayisana ngqo nobuntu buka-Iago, kuvela ukuheha okukhulu phakathi kwalaba bobabili abazama ukuhlangana isikhathi esithile ... baze banikeze bese beqala ubudlelwane bothando.
ULür, "inzalamizi" (Héctor del Castillo) ungowokuzalwa eCueva del Castillo, lapho azalelwa khona cishe eminyakeni engama-28.000 edlule. Angabhekwa "njengomphathi wesintu." Injongo yalo eyinhloko ukugcina ubunye bomndeni wakudala ngazo zonke izindlela. Ngomuntu onobungane nozolile, ungumfundi okhuthele futhi othanda ukudoba. Abathathu kuphela ezinkulungwaneni zezingane zakhe abazuze njengefa ubusha baphakade, imbangela yesayensi? Yebo, akekho noyedwa osithathile ... kuze kube manje.
Imininingwane ebonakalayo encazelweni yesikhathi esedlule ikhombisa imibhalo emihle kakhulu eyenziwe phambilini ngu-Eva García Sáenz. Ukuhlehla futhi kusetshenziselwa ukuchaza izimbangela zezingxabano zomndeni. Lokhu kungeza isigqi esithokozisayo futhi esinamanzi kakhulu emakhasini angaphezu kwangu-700 we Isaga sempilo ende: umndeni wakudala.
Ukuhlaziywa kanye ne-synopsis yamaDodana ka-Adam
Njengasencwadini yokuqala yochungechunge, UGarcía Sáenz akashiyi imikhondo engahleliwe noma engeza izinhlamvu zokugcwalisa. Yonke imininingwane ilungile, imininingwane iyalungiswa ngokunemba kwamamilimitha. Ngaphezu kwalokho, umbhali akabaphoxanga abalandeli bakhe yize bekulindelwe kakhulu kusukela lapho Umndeni wakudala. Ekuqaleni, le ndaba iba namandla, yize kunesimo esihle phakathi kuka-Adriana no-Iago, abacabanga ngekusasa ndawonye.
Engxenyeni yokuqala, abalingisi abaphambili bahlukanisa iphethini engajwayelekile kuma-enzyme abhekele ukuhlanganisa ama-telomeres ama-DNA (ama-telomerases) ezingane zikaLür. njengesizathu sokuboshwa kokuguga kwabo. Kodwa-ke, i-telomerase inhibitor efakwe eNagorno isebenze ngaphambi kwesikhathi obekulindelwe. Lokhu kubangela ukuthi inhliziyo yakhe isebenze njengaleyo eneminyaka engu-30 ngenkathi ukubukeka kwakhe kuqhubeka kube yi-XNUMX.
Izingane zika Adam.
Kuleli qophelo, uNagorno ophelelwe yithemba unquma ukuthumba uDana njengecebo lokucindezela ekufuneni isisombululo. (Kufanele kube ngaphansi kwezinsuku ezingama-21). Ngenxa yalokho, ingxenye yomndeni wakudala iyahlangana futhi. Lokhu kufaka phakathi ukuvela okumangazayo komlingiswa othathwa njengofile encwadini yokuqala.
Kuqhathaniswa, en Amadodana ka-Adam imininingwane ye engqondweni kusukela esikhathini esidlule abacebile kangako noma abanakekelwa kangako —Kusukela ekubukeni kwesayensi— njengalezo zesitolimende sokuqala. Kepha, ngaphandle kokungabaza, kufinyelelwe ngendaba ebamba umfundi kalula. Okusho ukuthi, ayilahli izinga lekhwalithi. Isimanga siphenduka nesabelo senjabulo se Isaga sempilo ende: umndeni wakudala.
Ngabe kuzoba nesitolimende sesithathu seSaga seSikhathi Eside?
Mhlawumbe umbuzo ongakaxazululwa kakhulu kubafundi balo lonke uchungechunge ukufaniswa kwenkinga yenkukhu neqanda.: uma ukudlulisa isakhi sofuzo sokuguga udinga esaphila isikhathi eside, esokuqala savela kanjani? Abalandeli abathembekile kakhulu bakaGarcía Sáenz banethemba lokuthi imfihlakalo izocaciswa ngokuphelele kwisitolimende sesithathu.
Mayelana nalokhu, umbhali waseCantabrian utshele abezindaba amaphepha we Umkhakha wezincwadi: «Ngibhale inoveli yokuziphendulelaYize isihloko se- "saga" sidukisa, ngaso bengisho isaga somndeni. Ukuthi kunokuningi okudilivwayo kwesikhathi eside kuzoncika ekutheni kufinyelela kude kangakanani.
Uma ngingathola isikhathi esezingeni eliphakeme sokubhekana nokubhalwa kwenye inoveli futhi -Okuqala wangithatha izinyanga ezingama-27 futhi ngakubhala ebusuku, ngemuva komsebenzi wami eNyuvesi kanye nezibopho zomndeni ezinzima kakhulu, ngaphandle kokungabaza kuzoba nezindaba eziningi zempilo ende.
Iminyaka eyizinkulungwane ezingamashumi amabili nesishiyagalombili yomlando ihamba ibanga elide futhi abalingiswa sebechazwe kahleZinezici eziningi futhi zinkulu kakhulu ukuthi zizosebenza kunoma iyiphi inkathi yomlando. Kunoma ikuphi, bazohlala bengamanoveli okuzenzela bona; Njengomfundi, angikwazi ukuchitha iminyaka embalwa ngilinde ukuthola ukuthi indaba iphela kanjani.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Isaga sabaphila isikhathi eside ngu-Eva García Sáenz
UDamaso Alonso. Amonnethi ama-5 ngosuku lokukhumbula iminyaka engama-30 eshonile